Matambudziko eDropbox ekuchengetedza akagadziriswa mune nyowani macOS Sierra | Ndinobva mac
Dambudziko reDropbox rekuchengetedza rakagadziriswa mune nyowani macOS Sierra
Tinoenderera mberi kuzivisa vateveri vedu nezve nhau kuti macOS Sierra inounza iyo pasi pehood, asi ino iri nguva inoenderana neyakakurumbira chengetedzo kukanganisa kwaivapo pamwe neDropbox sevhisi muOS X El Capitan. Tinogona kukuzivisa izvozvo iko kukanganisa kwekuchengetedzwa kwatogadziridzwa mushanduro iyi nyowani yeakarumwa apple system.
Dambudziko ratiri kutaura nezvaro rakabvumidza mushandisi asina mvumo kuti awane sisitimu asina kukumbirwa mvumo inodiwa kuti aite saizvozvo. Izvi zvakaita kuti Dropbox ishandise system pane OS X isingafadzi. uye kuti vese vashandisi vakafumurwa paburi rekuchengetedza.
Nekudaro, nekuuya kweMacOS Sierra mazuva maviri apfuura, iyi bug yatogadziriswa uye nekudaro, isu tinogona ikozvino kushandisa iyo Dropbox faira system sezvo gomba rekuchengetedza risingachagone kushandiswa neimwe nzira. Vaya vari muCupertino vakachinja masisitimu nenzira yekuti kuwana kusiri iko kwadzivirirwa kusarudza Accessibility nekuda maapplication kukumbira mushandisi zvakajeka mvumo yekuzviita.
Dai iwe usina kucherechedza izvi, tinogona kukuudza kuti muOS X iyo Dropbox application yakaonekwa yakanangana netab Kuchengetedzwa uye Kuvanzika mukati meChikamu Chekuwanika Kunyangwe iwe semushandisi usati wambopa mvumo yekuti zvionekwe munzvimbo iyoyo. Ndokusaka yakaonekwa seyakakomba yekuchengetedza kukanganisa iyo Apple yakagadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Dambudziko reDropbox rekuchengetedza rakagadziriswa mune nyowani macOS Sierra
Vakazvigadzirisa mu macOS Sierra, asi iwe unoziva chero chinhu nezve avo vedu vanotevera muEl Capitan kana muYosemite? Izvo zvinoita kunge zvisiri kwandiri kuti vanosiya avo vasingakwanise kana vasingade kugadzirisa iyo system.
Chenjerera iyo itsva iCloud gwaro sync mune macOS Sierra